Posted by ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) at Saturday, April 10, 2010 Saturday, April 10, 2010 Labels: ပျော်ပျော်ပါးပါး ဟာသများ
ပြောရဦးမယ်ဗျာ ကျွန်တော်တို့ရွာက ကောင်မလေး တစ်ယောက်အကြောင်း…..
သူ့နံမည်က လှအုန်းမယ် တဲ့.. ကျွန်တော်တို့ရွာမှာတော့ သိပ်ချောတဲ့ ကောင်မလေးပေါ့ဗျာ.. ကွမ်းတောင်ကိုင်လေး ဆိုပါတော့.. ရွာက ကာလသားတွေများ သည်းသည်းကိုလှုပ်လို့.. အင်း ကျွန်တော်လည်းပါသလား ဆိုတော့ ဟဲဟဲ ဒါတော့ ဘယ်ပြောလို့ဖြစ်မလဲ..ပါတာပေါ့ဗျ.. ဘယ်နေလိမ့်မတုန်း.. ဒါနဲ့ လှအုန်းမယ်လေးက ဘယ်သူနဲ့တူသလဲဆိုတော့ ရွာက ဗွီဒီယိုရုံမှာ ခနခန ပြတတ်တဲ့ ဟို ရုပ်ရှင်မင်းသမီးလေ.. ဘယ်သူပါလိမ့်.. နံမည်က ခပ်မေ့မေ့.. အော် သိပြီ.. ခိုင်သင်းကြည်ရယ်လေဗျာ .. ဟုတ်တယ် လှအုန်းမယ်က ခိုင်သင်းကြည်နဲ့ တူတယ်ဗျ.. နောက်တူတာတစ်ခုက ဇာတ်ကားတွေမှာ ခိုင်သင်းကြည်က သိပ်စွာတယ်.. လှအုန်းမယ်ကလဲ အပြင်မှာ စွာကျယ်မ.. ဆတ်ဆတ်ကြဲ.. ရွာက ကာလသားတွေ သူ့ကို ကြိုက်ပေမဲ့ သူ့ပါးစပ်ကိုလန့်တယ် ဘယ်သူကမှ အနား မကပ်ရဲဘူး.. လှအုန်းမယ်ကလည်း သူ့ကိုယ်သူ ခိုင်သင်းကြည်နဲ့တူတယ် ဆိုတာသိတော့ ဘ၀င်က မြှင့်တယ်ဗျ.. သူနဲ့ တူတယ် တန်တယ်ဆိုတဲ့သူ ရွာမှာ မရှိတော့ဘူးမှတ်တာ..
ဒီလိုနဲ့ ရွာမှာ စုပေါင်းရှင်ပြုပွဲ ရှိတယ်ဆိုပါတော့ဗျာ.. စုပေါင်းရှင်ပြုပွဲဆိုတဲ့အတိုင်း ရှင်လောင်းပေါင်းများစွာ စုပေါင်းပြီး ပြုကြမှာဆိုတော့ ခြိမ့်ခြိမ့်သည်းပေါ့.. ဇာတ်တောင်မှ နံမည်ကြီး ဖိုးချစ်ဇာတ်ကို ငှားတာ… တစ်ရွာလုံးလဲ တက်တက်ကြွကြွ၊ ကာလသားတွေကလဲ ရှင်ပြုမဏ္ဍပ်တွေဆောက်၊ ရွာလူကြီးတွေကလဲ အလှူအတွက် လိုအပ်တာတွေ မြို့ကို ဈေးဝယ်ထွက်ကြ၊ အပျိုအုပ်စုကလဲ အလှူမှာ ချက်ပြုတ်ကျွေးမွေးမဲ့ အသင်းတွေ ဖွဲ့ကြ တာဝန်တွေ ခွဲကြနဲ့ တစ်ရွာလုံး ဘယ်သူမှ မကျန်ပါဘူး.. အလှူအတွက် ၀ိုင်းဝန်းနေကြတာ.. ကျွန်တော်တို့ ရွာမှာ ထုံးစံက အလှူလှည့်တဲ့နေ့မှာ အချောဆုံး အပျို ၂၄ယောက်ကို ပရိတ်အိုး ကိုင်ခိုင်းရတယ်.. ပရိတ်အိုးတစ်လုံးစီမှာ ဟေတုပစ္စယော၊ အရမဏပစ္စယော စသဖြင့် ၂၄ ပစ္စယောကို တစ်အိုးတစ်လုံးစီ ရေးထားတယ်ဗျာ... ၂၄ပစ္စယောဆိုတော့ အိုး၂၄လုံးပေါ့.. အိုးထဲမှာ ချည်လုံးတစ်လုံးရယ် သပြေခက်၊ အုန်းရွက်၊ ဒန်းရွက် စတာတွေ ပါတယ်.. အဲလို အလှူလှည့်တဲ့နေ့မှာ ပရိတ်အိုးကိုင် ရှေ့ဆုံးကောင်မလေးက လှအုန်းမယ်ပေါ့ဗျာ... သူက အချောဆုံးဆိုတော့ ရှေ့ဆုံးပေါ့…
လှအုန်းမယ်က ဒီတစ်ခေါက် ထူးထူးခြားခြား ဒေါက်မြှင့်ဖိနပ်လေးနဲ့ဗျ.. သိပ်မကြာခင်က ဗွီဒီယိုတစ်ကားမှာ ခိုင်သင်းကြည် စီးသွားတဲ့ ဖိနပ်ဆိုလား.. အလှူအတွက် မြို့တက်ပြီး ဈေးသွားဝယ်တဲ့ အဖွဲ့ကို မှာလိုက်တာလို့ ကြားမိတယ်.. ဒေါက်ဖိနပ်နဲ့ဆိုတော့ ကြည့်ရတာ ပိုတောင်လှနေတယ်လို့ ထင်မိသေး.. ဒါပေမဲ့ ခက်တာက ဒေါက်ဖိနပ်ကို သူက စီးကျင့်မရှိဘူး.. ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ရွာက လမ်းတွေကလဲ မြို့မှာလို ကတ္တရာလို့ခေါ်တဲ့ မဲမဲကြီးတွေ ခင်းထားတဲ့လမ်းတွေမဟုတ်ဘူးဗျာ.. မြေလမ်းကြမ်းကြမ်းပေါ်မှာ ကျောက်ခဲနဲ့ သလဲတွေနဲ့.. စီးကျင့်မရှိတဲ့ ဒေါက်ဖိနပ်နဲ့ ကျောက်ခဲတွေရှိနေတဲ့ မြေလမ်းခပ်ကြမ်းကြမ်းနဲ့ ဆိုတော့ သူလမ်းလျှောက်တာက ဟိုဘက်ယိုင်လိုက် ဒီဘက်ယိုင်လိုက်နဲ့.. ကြည့်ရတာ ဘယ်လိုမှ အဆင်မပြေပါဘူးဗျာ. အလှူလှည့်တာကို ၀ိုင်းကြည့်နေတဲ့ ရွာသူရွာသားတွေ ကလည်း လှအုန်းမယ်အဖြစ်ကို ကြည့်ပြီး ပြုံးစိစိနဲ့ပေါ့.. ဒါပေမဲ့ ဘယ်သူကမှတော့ အသံထွက်အောင် မရယ်ရဲဘူး.. သူ့ပါးစပ်ကို ကြောက်ကြတယ်လေ..
ဒီလိုနဲ့ ရွာလည်ပိုင်း လူစည်ကားတဲ့နေရာရောက်လာလေ လှအုန်းမယ်ရဲ့ဒေါက်ဖိနပ်က အခြေအနေ ဆိုးလေ.. ကြည့်ရတာ တစ်ခါမှ မစီးဖူးလို့ လမ်းလျှောက်ခက်တာအပြင် ဖိနပ်ပေါက်တဲ့ ဒဏ်ပါ ခံရပြီထင်ပါရဲ့.. ယိုင်နဲ့နဲ့ လျှောက်နေရာကနေ လူပေါင်းများစွာကလဲ ၀ိုင်းကြည့်နေတော့ ရှက်ကိုးရှက်ကန်းပေါ့.. ဒီချိန်မှာဘဲ လမ်းပေါ်မှာ ပြန့်ကြဲနေတဲ့ ကျောက်စရစ်ခဲလေးတစ်တုံးကို နင်းမိပြီးသကာလ လှအုန်းမယ်ရဲ့ ခြေထောက်က ခေါက်ခနဲဖြစ်ပြီး မြေကြီးပေါ် ခြေချော်ပြီး လဲကျသွားပါတော့တယ်… လဲကျသွားတော့ လှအုန်းမယ် လက်နဲ့ပိုက်ထားတဲ့ ပရိတ်အိုးက မြေပြင်ပေါ် ပြုတ်ကျပြီး ခွမ်းခနဲဆို နှစ်ခြမ်း ကွဲပါလေရော.. နဂိုက သူလှမ်းလျှောက်ပုံကို ကြည့်ပြီး ပြုံးစိစိဖြစ်နေကြတဲ့ ရွာလူထုနဲ့ အလှူလှည့်ရာမှာ ပါဝင်ကြတဲ့သူ အားလုံးဟာ ဘယ်လိုမှ အိနြေ္ဒမဆည်နိုင်တော့ဘဲ မပြုံးဘဲ ၀ါးလုံးကွဲ ၀ိုင်းရယ်ကြပါတော့တယ်.. ဒီမှာတင် လှအုန်းမယ်လေး ချော်လဲတော့ သူ့ကို ကြိုက်နေတဲ့ ရွာက ကာလသား ကိုလူအေးက မနှေးကလေး အပြေးသွားပြီး သွားဆွဲထူရာမှာ ရှက်စိတ်လဲမွန်၊ ဒေါသတွေလဲ ဝေနေတဲ့ လှအုန်းမယ်က ရှက်ရှက်နဲ့ လုပ်မိလုပ်ရာ လုပ်လိုက်တာက လာဆွဲထူတဲ့ ကိုလူအေးကို သူ့ရှေ့က အိုးခြမ်းကွဲနဲ့ ကောက်ထုလိုက်တာမှာ ကိုလူအေး ခေါင်းကွဲပါလေရော… လှအုန်းမယ်ရဲ့ ဒေါသကို ထည့်မတွက်မိဘဲ စေတနာပိုမိတဲ့ ကိုလူအေးရဲ့အဖြစ်က ထိပ်ပေါက်ခေါင်းကွဲ ဖြစ်ရရှာပါတယ်.. စေတနာဆိုတာလည်း အခြေအနေနဲ့ အချိန်အခါကို ကြည့်ပြီး ထားတတ်ဖို့လဲ လိုသေးတာကိုးဗျ...
အဖြစ်ကတော့ အဲဒီလိုပါဘဲဗျာ.. ကျွန်တော်တို့ ရွာအလှူအကြောင်းပြောတိုင်း လှအုန်းမယ်နဲ့ ကိုလူအေးရဲ့ အကြောင်းက မပါမပြီးပေါ့.. စေတနာကောင်းလို့ ခေါင်းကွဲသွားတဲ့ ကိုလူအေးကို အကြောင်းပြုပြီး တစ်ယောက်ယောက်ကို စေတနာပိုနေရင် “ သတိထား ကိုလူအေးလို ဖြစ်မယ်နော် ” လို့ ရွာမှာ ပြောစမှတ် ပြုကြသလို အလှူမှာ လှချင်လွန်းအားကြီးလွန်းလို့ မတန်မရာ ဒေါက်ဖိနပ်စီးပြီး ချော်လဲကာ ပရိတ်အိုး ကျကွဲတဲ့ လှအုန်းမယ်ကို အဲဒီနေ့ကစလို့ တစ်ရွာလုံးက လှအိုးကွဲ ရယ်လို့ နံမည်ပေးလိုက်ကြတယ်ဗျာ.. လှတပတ ချောချောမောမော ရွာရဲ့ကွမ်းတောင်ကိုင်ကလေးဟာ ဒေါက်မြှင့်ဖိနပ်ကို အကျင့်မရှိဘဲ စီးမိတဲ့ အတွက် လူပုံလယ်မှာ အရှက်ကွဲရသလို၊ နံမည်ရင်းပျောက်ပြီး လှအိုးကွဲ လို့ အမည်တွင်သွား ရတာသာ ကြည့်တော့ဗျာ.. တစ်ခုခုဆို ကိုယ့်အရပ်နဲ့ ကိုယ့်ဇာတ် တန်မတန်၊ သင့်မသင့်လဲ ကြည့်ဖို့လိုသေးတာကိုးဗျ..
Posted by ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) at Thursday, April 08, 2010 Thursday, April 08, 2010 Labels: ရသစာစုများ
ကျွန်မမှတ်မိသလောက် ပြန်စဉ်းစားရရင် ကျွန်မဟာ ငယ်စဉ်ကတည်းက မျက်စိနောက်စရာ ကောင်းလောက်အောင် ဆူညံအော်ဟစ်နေတတ်ပြီး စူးစမ်းလိုစိတ်များကာ စိတ်ဓာတ်လည်းပြင်းထန်တဲ့ မိန်းခလေးတစ်ယောက်ပါ.. ကျွန်မရဲ့ မေမေကတော့ ကျွန်မနဲ့ ဆန့်ကျင်စွာဘဲ အေးဆေး တည်ငြိမ်ကာ ရှေးရိုးစွဲ အစဉ်အလာ ကြီးပြီး စကားနည်းတဲ့ အိမ်ရှင်မ ကောင်းတစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ်.။ မေမေနဲ့ ကျွန်မ သဘောထားခြင်း မတိုက်ဆိုင်တိုင်း ကျွန်မနဲ့ မေမေ့ကြားက အသက်အရွယ် ကွာဟမှုကိုအကြောင်းပြပြီး ကျွန်မက မေမေ့ကို အပြစ်တင်လေ့ရှိတတ်ပါတယ်.. မေမေက ကျွန်မကို အသက် ၃၈နှစ်မှာမှ မွေးခဲ့တာပါ်.. ကျွန်မကို မွေးတဲ့ခေတ်အနေအထားနဲ့ဆို အသက်၃၈နှစ်ဆိုတာ ကလေးမွေးဖို့ သိပ်ကို နောက်ကျနေတဲ့ အသက်အရွယ်ဖြစ်ပါတယ်.. ဒါပေမဲ့ ကျွန်မမိဘတွေရဲ့ အသက်အရွယ်နဲ့ ပါတ်သက်ပြီး ကျွန်မရဲ့ သူငယ်ချင်း အသိုင်းအ၀န်းကြားမှာ ရှက်ကိုးရှက်ကန်းဖြစ်တဲ့ ခံစားချက်မျိုးတော့ ဘယ်တုန်းကမှ မဖြစ်ခဲ့ပါဘူး… ကျွန်မကို စိတ်အနှောက်အယှက် ဖြစ်စေတာက မေမေတို့ရဲ့ စည်းကမ်းတင်းကြပ်မှုနဲ့ ရှေးရိုးဆန်လွန်း အားကြီးမှုသာ…
အမြဲတမ်း တက်ကြွလှုပ်ရှားပြီး ပြာလောင်ခတ်နေတဲ့ ကျွန်မနဲ့ အေးဆေးတည်ငြိမ်ပြီး အိနြေ္ဒကြီးတဲ့ မေမေရဲ့ကြားမှာ ပဋိပက္ခဆိုတာကတော့ မြေကြီးလက်ခတ်မလွဲ ကြုံတွေ့ရမဲ့ ကိစ္စတွေသာဖြစ်ပါတယ်.. ကျွန်မရဲ့ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ် အချိန်ကာလေတွေတုန်းက မေမေနဲ့အမြဲတမ်း အငြင်းအခုန်ဖြစ်ရတယ်.. သဘောထားတွေ ကွဲလွဲနေခဲ့တယ်.. အဲဒီချိန်တုန်းက မေမေနဲ့ ကျွန်မကြား အကြီးမားဆုံး ပြဿနာတစ်ခုက ယောက်ျားလေး ကိစ္စနဲ့ ပါတ်သက်လို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်.. ယောက်ျားလေးတွေနဲ့ တွဲသွားတွဲလာ လုပ်ဖို့ကို မေမေက အပြင်းအထန် ကန့်ကွက်ပါတယ်.. တော်တော်လေးလည်း ချုပ်ချယ်ခဲ့ပါတယ်.. ကျွန်မရဲ့ အသက် ၁၈နှစ်ကို ရည်းစားထားဖို့ အရမ်း ငယ်သေးတယ်လို့ အကြောင်းပြပါတယ်..
ကျွန်မက ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုပြင်းထန်တဲ့ သူတစ်ယောက်လည်း ဖြစ်တော့ မေမေ့အကြောင်းပြချက်ကို လက်ခံနိုင်စရာ မရှိဘူး ဖြစ်နေပါတယ်.. ဒီအသက်အရွယ်ဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို တာဝန်ယူနိုင်တယ် အမှားအမှန် ဝေဖန်ဆုံးဖြတ်နိုင်တယ်လို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ထင်ခဲ့ပါတယ်.. စဉ်းစားဆင်ခြင်ဥာဏ်ရှိတဲ့ ကျွန်မအနေနဲ့ လူတစ်ယောက်ကို တကယ် မချစ်ခင်မနှစ်သက်ဘဲ အပျော် သက်သက် တွဲမှာ၊ လက်ခံမှာ မဟုတ်ဘူး ဆိုတာတော့ မေမေ နားလည်ပေးသင့်တယ် လို့ တွေးမိခဲ့ပါတယ်.. ဒီတော့ မေမေရဲ့ ရှေးရိုးစွဲ အစဉ်အလာကို မုန်းမိသလို မေမေ့ကိုလည်း ကိုယ့်သမီးအပေါ်မှာ နားလည်မပေးနိုင်ရကောင်းလားလို့ မကျေမနပ် ဖြစ်မိပါတယ်.. မေမေဟာ အသက်အရွယ်ကြီးနေပြီဖြစ်လို့ ဒီနေ့ခေတ်နဲ့ အလှမ်းကွာနေပြီး ခေတ်လူငယ်တွေကို နားလည် မပေးနိုင်တော့ဘူး၊ ခေတ်ကို မသုံးသပ်နိုင်တော့ဘူးလို့ ကျွန်မ ယူဆခဲ့တယ်။
ကျွန်မ တက္ကသိုလ် ပထမနှစ်မှာ ကျွန်မချစ်သူနဲ့စပြီး ဆုံတွေ့ခဲ့တယ်… သူက လူတော် တစ်ယောက်ပါ.. ရုပ်ရည်လဲရှိ၊ ပညာလဲတော်တယ်.. စိတ်သဘောထားလဲ မဆိုးဘူးလို့ ပြောရမယ်... သူနဲ့ ချစ်သူဘ၀ ရောက်သွားတဲ့အခါ ကျွန်မမိဘတွေနဲ့ သူ့ကို မိတ်ဆက်ပေးပါတယ်.. မေမေတို့က ရည်ရည်မွန်မွန် ရှိတဲ့ သူ့ကို သဘောကျပါတယ်.. ဒါပေမဲ့ မေမေရဲ့ မျက်နှာပေါ်မှာတော့ ကျွန်မအပေါ်ထားတဲ့ စိုးရိမ်သောကလေးကို တွေ့နေရဆဲပါ.. မေမေက ကျွန်မကို ဘယ်တုန်းကများ ယုံကြည်စိတ် ထားခဲ့လို့လဲလေ.. ကျွန်မချစ်သူနဲ့ ကျွန်မဟာ တကယ်လဲ နှစ်နှစ်ကာကာ ချစ်ခင်မြတ်နိုးကြပါတယ်.. တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်လဲ ကြင်ကြင်နာနာ ရှိခဲ့ကြပါတယ်.. ဒီလိုနဲ့ ချစ်သူသက်တမ်း တစ်နှစ်ကို အေးအေးဆေးဆေး တည်တည်ငြိမ်ငြိမ် ကျော်ဖြတ် လာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ မမျှော်လင့်တဲ့ အကြောင်းတွေကြောင့် ကျွန်မချစ်သူနဲ့ ရုတ်တရက် လမ်းခွဲလိုက်ရပါတယ် သူဟာ ကျွန်မရဲ့ပထမဦးဆုံး ရည်းစားဦးလဲဖြစ်တယ်.. ကျွန်မကိုယ်တိုင်က နှစ်နှစ်ကာကာ ချစ်ခင်စုံမက်ခဲ့ရသူလဲ ဖြစ်တဲ့အတွက် သူနဲ့လမ်းခွဲချိန်မှာ ကျွန်မအသည်းနှလုံးတစ်ခုလုံး မွမွကြေသွားသလို ခံစားရပါတယ်.. ဘ၀ရဲ့ မျှော်လင့်ချက်တွေ ၊ရည်မှန်းချက်တွေ အားလုံး ပျက်စီးကုန်တယ်ပါတယ်.. ကိုယ့်ကိုယ်ကို ရင့်ကျက်ပြီ၊ အရာရာကို သိနားလည်ပြီလို့ ထင်ခဲ့တဲ့ ကျွန်မဟာ ချက်ခြင်းဘဲ ဘာမှ မသိ၊နားမလည်တဲ့သူတစ်ယောက်လို ဖြစ်သွားခဲ့ရပါတယ်။
ကျွန်မချစ်သူနဲ့ လမ်းခွဲပြီးချင်းချင်းမှာဘဲ ကျွန်မဟာ မေ့မေဆီကို ပြေးသွားပြီး သူ့ပုခုံးပေါ်မှာ ကလေးတစ်ယောက်လို ရှိုက်ကြီးတငင် ငိုချမိပါတယ်.. အဲဒီချိန်မှာ မေမေဟာ ကျွန်မကို အပြစ်တင်ခြင်း၊ ဆူပူကြိမ်းမောင်းခြင်းဘာတစ်ခုမှ မလုပ်သလို ငါမပြောဘူးလား အစက ဒီလိုဖြစ်လာမယ်ဆိုတာ စတဲ့ စကားတွေလည်း ဘာတစ်ခွန်းမှ မပြောခဲ့ပါဘူး.. ကျွန်မရဲ့ လက်ကလေးကို အသာအယာ ဆုပ်ကိုင်ပြီး ငယ်ငယ်က မေမေ နမ်းနေကျ ပုံစံအတိုင်း ကျွန်မရဲ့နဖူးလေးကို ဖွဖွလေးနမ်းပါတယ်.. ကျွန်မ အရှက်ရအောင်၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အပြစ်တင်ချင်တဲ့စိတ်တွေ ၀င်လာအောင် မေမေက ဘာတစ်ခွန်းမှ အပြစ်တင်စကား၊ ဆုံးမစကား မပြောခဲ့ပါဘူး.. ကျွန်မပြောသမျှကို တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ဘဲ ကျွန်မကို ကြည့်ပြီး အလေးအနက် နားထောင်နေပါတယ် မေမေရဲ့ မျက်ဝန်းမှာလည်း လောလောလတ်လတ် အသည်းကွဲနေတဲ့ ကျွန်မနဲ့ထပ်တူ မျက်ရည်တွေ ကျနေခဲ့ပါတယ်။
စကားတွေလဲ ပြောပြီးလို့ ငိုလို့ အားရပြီးတဲ့နောက် မေမေ့ကို ရင်ဖွင့်လိုက်ရတဲ့အတွက် ကျွန်မစိတ်လဲ အတော်အတန် ပေါ့ပါးသွားပါပြီ.. ဒါပေမဲ့ ကျွန်မရင်ထဲမှာတော့ နားမလည်နိုင်ခြင်းများစွာ ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်.. စိတ်တွေလဲ ရှုပ်ထွေးနေခဲ့တယ်.. ဘာလို့များ ဒီအဖြစ်အပျက်တွေဟာ ကျွန်မကိုမှ လာပြီးဖြစ်တာလဲ.. ဒီလောက်ချစ်ခဲ့တဲ့ ချစ်သူရဲ့ အပြစ်မြင် စွန့်ခွာခြင်းကို ဘာကြောင့်များ ကျွန်မရရှိတာလဲ.. ကျွန်မရင်ထဲမှာ ဒေါသတွေလဲ ထွက်နေခဲ့ပါတယ်.. မေမေ့ကိုလဲ ဒီအကြောင်းကို ဖွင့်ပြောမိတယ်.. ဒေါသတကြီး ပြောနေတဲ့လေသံကို ကျွန်မကိုယ်တိုင်တောင် အံ့အားသင့်မိတယ်.. ကျွန်မဟာ သူငယ်နှပ်စားမဟုတ်သလို မလှမပနဲ့ အသိဥာဏ် မရှိတဲ့သူလည်း မဟုတ်ပါဘူး.. ဒါနဲ့တောင် ကျွန်မချစ်သူက ဘာကြောင့်များ လမ်းခွဲရတာလဲ.. ကျွန်မတို့ဟာ ဘာကြောင့်များ အဆင်မပြေဖြစ်ရတာလဲ .. ကျွန်မ တော်တော်လေးကို ခံပြင်းမိပါတယ်… ၀မ်းလည်းနည်းတယ် ယူကျုံးမရလည်း ဖြစ်မိပါတယ်.. ဘ၀မှာ ဆက်ပြီး နေချင်စိတ် မရှိတော့သလိုကို ခံစားရပါတယ်။
ကျွန်မမေမေဟာ ဘယ်တော့မှ ဖွင့်မပြောခဲ့တဲ့ ပွင့်လင်းမှုမျိုးနဲ့ ကျွန်မကို ငြင်ငြင်သာသာ ရှင်းပြပါတယ်. မေမေဟာ သူ့ရဲ့ ခံစားချက်တွေကို ဖွင့်ဟပြောတယ်ဆိုတာ ဘယ်တုန်းကမှ မရှိခဲ့ပါဘူး.. အမြဲတမ်း တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ စည်းကမ်းတင်းကြပ်သူမို့ တစ်ခါတစ်လေ ကျွန်မစိတ်ထဲမှာ မေမေရဲ့ငယ်ဘ၀ဟာ ဘယ်လိုများ နေပါလိမ့်လို့ သိပ်ကို သိချင်စိတ် ပြင်းထန်ခဲ့ဖူးပါတယ်..ဒါပေမဲ့ မေမေ့ကို ဘယ်တုန်းကမှ မမေးရဲခဲ့ပါဘူး… အခုတော့ မေမေဟာ သူ့ငယ်ဘ၀အကြောင်းကို ပြောပြနေခဲ့ပါပြီ.. သူရဲ့ ပထမဆုံး အချစ်ဦးနဲ့ ကွဲခဲ့ရတဲ့အချိန်မှာ ဘယ်လောက်တောင် ခံစားရခဲ့ရတာတွေ ဘ၀ကြီးတစ်ခုလုံး ပျက်စီးသွားတော့မတတ် ခံစားခဲ့ဖူးတဲ့အကြောင်းနဲ့ အရူးတစ်ယောက်လို ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းတွေ၊ အချိန်တစ်ခု ကုန်ဆုံးသွားတဲ့ချိန်မှာတော့ ဘယ်လိုခံစားချက်သာ ရှိတော့တယ်ဆိုတာတွေ ပြောပြပါတော့တယ်။
မေမေဟာ သူ့ရည်းစားဦးကြောင့် အသည်းကွဲတဲ့အချိန်မှာ နှစ်ပတ်တိတိ မရပ်မနား ငိုကြွေးနေခဲ့ပါတယ်တဲ့.. အဲဒီချိန်မှာ လောကကြီးဟာ သူ့အတွက် ဘာမှ မျှော်လင့်ချက်မရှိတော့သလို၊ ဘ၀ကြီးတစ်ခုလုံးဟာလည်း အဓိပ္ပါယ် မရှိတော့သလို ခံစားခဲ့ရကြောင်းနဲ့ အချိန်အတိုင်းအတာ တစ်ခုကို ကျော်ဖြတ်ပြီးသွားချိန်မှာတော့ နာကျင်ခံစားခဲ့ရတာတွေဟာ တစ်ဖြေးဖြေး ပျောက်ကွယ်သွားရပြီးတဲ့နောက် မှတ်ဥာဏ်ထဲမှာ အဲဒီအသည်းကွဲတဲ့ ဒဏ်ရာဟာ ခပ်မှိန်မှိန်လေးသာ ကျန်ရစ်ခဲ့တော့ကြောင်း ပြောပြပါတယ်.. ပြီးတော့လဲ ကျွန်မကိုပြောတာက တစ်ချိန်ချိန်မှာ ကျွန်မဟာ နောက်ထပ် ချစ်ရမဲ့သူ တစ်ယောက်ယောက်နဲ့တွေ့ပြီး လက်ထပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ အခုအသည်းကွဲတဲ့ အဖြစ်ကို ပြန်တွေးလိုက်တဲ့ချိန်မှာတော့ ပြုံးစရာလေးတစ်ခုအဖြစ်နဲ့သာ ကျန်ရစ်တော့မှာ သေချာပါတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
မေမေရဲ့ စကားတွေကိုကြားမိတော့ ကျွန်မ စိတ်သက်သာရာ ရလာသလို အံ့သြတကြီးလဲ ဖြစ်ရပါတယ်.. ကျွန်မ အကြီးအကျယ်အံ့သြမိတာက တစ်ခြားမဟုတ်ပါဘူး.. မေမေ့ရဲ့အချစ်ဦးဟာ ကျွန်မရဲ့ဖေဖေ မဟုတ်ခဲ့တာကိုပါ… လူတော်တော်များများဟာ ချစ်တိုင်းလည်း ညားကြတာ မဟုတ်သလို၊ အချစ်ဦးတိုင်းနဲ့လည်း ပေါင်းခွင့်ရချင်မှ ရတာဖြစ်ကြောင်း မေမေက သူ့ကိုယ်သူ နမူနာပြပြီး ကျွန်မကို ရှင်းပြပါတယ်.. မေမေဟာ ခုချိန်မှာ ကျွန်မရဲ့ မိခင်တစ်ဦးအဖြစ်သာမက ကျွန်မလို အဖြစ်မျိုးကို ကြုံခဲ့တဲ့ ဘ၀တူ မိန်းမသားတစ်ဦး ဖြစ်နေတာကိုပါ သိခွင့်ရလိုက်တော့ အံ့သြမိတဲ့စိတ်နဲ့အတူ မေမေ့အပေါ်မှာလည်း ပိုပြီး ရင်းနှီး တွယ်တာစိတ် ဖြစ်လာတယ်.. ပြီးတော့လည်း ကျွန်မရဲ့ အသည်းကွဲဒဏ်ရာကလည်း သက်သာရာ ရလာသလို ခံစားမိရပါတယ်.. သူ့အကြောင်းတွေကို ဘယ်တုန်းကမှ မပြောပြခဲ့တဲ့ မေမေဟာ ခုချိန်မှာတော့ မေမေရဲ့အချစ်ဦးအကြောင်းတွေကို ကျွန်မကို မကွယ်မ၀ှက်ပြောနေတဲ့ အတွက် မေမေ့ အပေါ်မှာ ကျွန်မရဲ့ ခံစားချက်က မိခင်တစ်ဦး အဖြစ်သာမက အရင်းနှီးဆုံး သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် အဖြစ်ပါ စိတ်ထဲမှာ လက်ခံ သဘောထားလာမိပါတော့တယ်.။
ဒီအဖြစ်အပျက်တွေ ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ ကျွန်မဘ၀မှာ ဘယ်လိုဘဲ အခက်အခဲကြုံလာ၊ ဘယ်လောက်ပဲ ဒုက္ခတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်တွေ့လာပါစေ မေမေနဲ့ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီး မေမေ့ဆီက အကြံဥာဏ်တွေ၊ စကားတွေ ခွန်အားတွေနဲ့ အတူ ကျွန်မရဲ့ အခက်အခဲ ပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်.. သူငယ်ချင်း အပေါင်းအသင်းကိစ္စ၊ အလုပ်အကိုင်၊ ကျွန်မရဲ့ ရည်းစား ကိစ္စ၊ စတဲ့ ကိစ္စအားလုံးကို မေမေ့ကို ကျွန်မက မချွင်းမချန် ပြောပြလေ့ရှိပါတယ်.. နောက်ထပ်လည်း အသည်းကွဲတဲ့ ဖြစ်ရပ်တွေ ကျွန်မဘ၀မှာ ထပ်ပြီး ကြုံတွေ့လာရပါတယ်.. ဒါပေမဲ့ မထမဆုံး အသည်းကွဲတုန်းကလို အသည်းအသန် ခံစားချက်မျိုး မဖြစ်တော့ပါဘူး.. ဒါကြောင့်လည်း လူတွေဟာ အချစ်ဦးကြောင့် ခံစားရတဲ့ ခံစားချက်က ဘာနဲ့မှ မတူဘူးလို့ ခိုင်းနှိုင်းကြတာဘဲ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်.. ဟုတ်ပါလိမ့်မယ်လေ .. အချစ်ဦးဆိုတာ အချစ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဘ၀ရဲ့ ပထမဆုံး အတွေ့အကြုံလဲဖြစ်တာကိုး။
နှစ်အတန်ကြာလို့ ကျွန်မခင်ပွန်းလောင်းဖြစ်လာမဲ့သူနဲ့ စပြီးဆုံတွေ့တော့ ပထမဆုံး ကျွန်မလုပ်တဲ့ အလုပ်က အဝေးက မေမေ့ဆီက ဖုန်းခေါ် မိတာပါဘဲ… ဖုန်းခေါ်ပြီးတော့ ကျွန်မခင်ပွန်းလောင်းဖြစ်တဲ့ သူ့အကြောင်းတွေ ပြောပြပါတော့တယ်.. သူ့အကြောင်းတွေပြောပြနေတဲ့အခါ တစ်ဘက်ကနေ မေမေက ကျွန်မစကားသံကို တိတ်ဆိတ်စွာ နားထောင်နေရင်း စကား ဆုံးခါနီးတော့ ကျွန်မကို စကားလေး တစ်ခွန်း လှမ်းမေးပါတယ်.. “ သမီး… သမီးရဲ့ ပထမဦးဆုံး ရည်းစားဦးကြောင့် အသည်းကွဲခဲ့တာကို မှတ်မိသေးလား” တဲ့.. ကျွန်မလဲ မေမေရဲ့ အမေးကို ခပ်ဖွဖွရယ်သံလေးနဲ့ “ မှတ်မိတယ်မေမေ.. ဘာဖြစ်လို့မေးတာလဲ ” လို့ ပြန်မေးလိုက်တော့ မေမေရဲ့ ပြန်ပြောသံလေးမှာ ကျွန်မအပေါ် ကြင်နာသနားမှုနဲ့ နားလည်စာနာမှု အပြည့်ပါတဲ့ လေသံလေးဖြစ်ကြောင်းကို ကျွန်မရင်ထဲက ခံစားလိုက်မိပါတယ်.. မေမေက အဲဒီချိန်မှာ ကျွန်မကို ပြန်ပြောတဲ့စကားလေးတစ်ခွန်းက “သမီး အခု အဲဒီအကြောင်း ပြန်စဉ်းစားမိတော့ ပြုံးနေတယ်မဟုတ်လား ” တဲ့။
ကျွန်မနားလည်လိုက်ပါတယ်.. မေမေဘာကြောင့် ဒီချိန်မှာ ဒီလိုမေးခွန်းလေးကို မေးလိုက်တယ်ဆိုတာကိုပေါ့.. ကျွန်မ ပထမဆုံး ရည်းစားဦးနဲ့ ကွဲတဲ့အချိန်တုန်းက ကျွန်မဘ၀ကြီးတစ်ခုလုံး အဓိပ္ပါယ်မဲ့သွားခဲ့တယ်၊ မျှော်လင့်ချက်ဟူသမျှ ဆိပ်သုဉ်းသွား ခဲ့တယ်၊ ဒီအသည်းကွဲတဲ့ ခံစားချက်ကြီးကဘဲ ဘ၀တစ်ခုလုံးအတွက် အရေးအကြီးဆုံး ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ ထင်ခဲ့မိတယ်လေ.. အသက်ဆက်ရှင်သန်ဖို့တောင် အင်အားမရှိတော့သလို ခံစားခဲ့ရတယ် မဟုတ်လား.. ဒါပေမဲ့ အချိန်ကာလလေး တစ်ခု ကြာသွားတဲ့အခါမှာတော့ အသည်းကွဲတုန်းက ခံစားခဲ့ဖူးတဲ့ ဒီခံစားချက်တွေဟာ အခုပြန်တွေးလိုက်ချိန်မှာတော့ ပြုံးစရာလေးတစ်ခုသာ ဖြစ်သွားခဲ့ရပြီ မဟုတ်ပါလား။
ဒီဝတ္ထုလေးကတော့ လက်ရှိအချိန်မှာ အသည်းကွဲနေတာကို ဘ၀တစ်ခုလုံး ပျက်စီးမတတ် ခံစားနေရပါတယ်.. မျှော်လင့်ချက်မှန်သမျှ၊ ရည်မှန်းချက်မှန်သမျှ ပျက်စီးကုန်ပါပြီ.. လို့ ဆိုလာကြတဲ့ လူငယ်လေးများအတွက် ရည်ရွယ်ပြီး ဘာသာပြန်ဖြစ်ပါတယ်.. အချိန်ကာလလေးတစ်ခုကို ကျော်လွန်ပြီးသွားတဲ့ချိန်မှာ ခံစားခဲ့ရဖူးတဲ့ ပြင်းထန်တဲ့ အသည်းကွဲ ဝေဒနာတွေဟာ ရယ်စရာ ပြုံးစရာလေးတွေ ဖြစ်သွားတတ်ပါကြောင်းကို ဒီ ၀တ္ထုတိုလေးနဲ့ ညွှန်းဆိုလိုက်ပါတယ်... အားလုံးပဲ အသည်းကွဲတဲ့ ဝေဒနာမှ သက်သာရာ ရကြပါစေရှင်…
နွေရာသီမှာ အသားအရေ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ဖို့
Posted by ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) at Wednesday, April 07, 2010 Wednesday, April 07, 2010 Labels: အလှအပရေးရာ
ပူပြင်းသော နွေရာသီကာလသည် မိမိ၏ အသားအရေကို အထူးတလည် စောင့်ရှောက်ရမည့် အချိန်ကာလ ဖြစ်ပါသည်။ နွေနေ၏ ပြင်းထန်လှသော နေရောင်ခြည်၊ ပတ်ဝန်းကျင်မှဖုန်မှုန့်များ၊ တိုက်ခတ်သောလေ၊ ခန္ဓာကိုယ်မှ ထွက်လာသောချွေး စသည်တို့သည် အရေပြား၏ နု့ညံ့သိမ်မွေ့သော ဆဲလ်များကို ပျက်စီးစေပြီး ချွေးပေါက်များကို ပိတ်ဆို့စေပါသည်။ မကြည်မလင် ကွက်တိကွက်ကြားနှင့်၊ အဆီပြန်နေသော မိမိ အသား အရေကို ကြည့်ပြီး အခြား အချိန်ကာလတွေနှင့် မတူသည့်အတွက် အံ့သြကောင်း အံ့သြမိပါလိမ့်မည်။ အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော် ဆောင်းရာသီတွင် သင်၏ အရေပြားမှ ထွက်သော သဘာဝ အဆီဓာတ်သည် ပြင်ပကို သိပ်မထွက်ဖြစ်သော်လည်း နွေရာသီတွင်တော့ လွတ်လပ်စွာ အငွေ့ပျံကုန်နိုင်ကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ အရေပြားပေါ်တွင် ဖြစ်ပေါ်လာသော အရေးအကြောင်းများ၏ ၉၀% သည် နေရောင်ခြည်၏ ပူပြင်းမှု ဒဏ်ကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ အချိန်ကြာမြှင့်စွာ ပူပြင်းနေသော နေရောင်ခြည်နှင့် လှိုင်းအလျားတိုသော ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်တို့သည် အရေပြား၏ အနက်ရှိုင်းဆုံး နေရာအထိသို့ ထိုးဖောက် ၀င်ရောက်သွားနိုင်ပြီး အသားအရေကို ဖျက်ဆီးစေနိုင်ပါသည်.. ဖြူဖွေးသော အသားအရေရှိသူများ၏ အရေပြားသည် ရောင်ခြယ် နည်းပါးသည့်အတွက် အသားညိုသူများထက် ပိုပြီး အရေပြားပျက်စီးလွယ်သလို အသားအရေတွန့်ခြင်းလည်း ပို၍ ဖြစ်နိုင်ချေများပါသည်။
နေရောင်ခြည်ကြောင့် အရေပြားတွန့်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်အတွက် အထူးသဖြင့် မနက်၁၀နာရီမှ ညနေ၄နာရီထိ နေပူထဲသို့ထွက်ခြင်းကို ရှောင်ကျဉ်ပါ။ ထိုအချိန်သည် ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည် ဖြာထွက်မှု အပြင်းထန်ဆုံး အချိန်များဖြစ်သည်။ တတ်နိုင်သမျှ အရိပ်အတွင်းသာ နေပါ။ နေရောင်ခြည်ဒဏ်မှ ခံနိုင်မည့် အ၀တ် အစားများကိုသာ ၀တ်ဆင်ပါ။ အရောင်ရင့်သော အ၀တ်အစားများကို ရှောင်၍ အရောင်ဖျော့တော့သော အ၀တ်အစားများနှင့် ချည်ထည်များကို ရွေးချယ် ၀တ်ဆင်ပါ။ Sunscreen ကို များများ အသုံးပြုပါ။ အပြင်မထွက်ခင် ၁၅မိနစ်မှ မိနစ်၃၀အတွင်း Sunscreen ကို ကြိုတင်၍ လူးထားပါ။ မိမိအရေပြားပေါ်တွင် ချွေးထွက်လျှင် သော်လည်းကောင်း၊ ရေစိုသွားလျှင် သော်လည်းကောင်း Sunscreen ကို ပြန်လူးပါ။ Sunscreen ကို တစ်နှစ်ပတ်လုံး အပြင်ထွက်သည့် အချိန်တိုင်း အသုံးပြုပါ။ UVB ၊ UBA ၂မျိုးစလုံးမှ အကာအကွယ်ပေးနိုင်သော Sunscreen ကို ရွေးချယ် ၀ယ်ယူပါ။ အပြင်ထွက်လျှင် နေရောင်ဒဏ်မှ ကာကွယ်ပေးနိုင်သော နေကာမျက်မှန်ကို ၀တ်ဆင်ပါ။ SPF ပါဝင်မှု များပြားသော မိတ်ကပ်ကို ရွေးချယ်သုံးစွဲပါ။ နှုတ်ခမ်းကိုလည်း SPF ပါသော နှုတ်ခမ်းနီမျိုးသာ အသုံးပြုပါ။ ညအိပ်ရာဝင်ချိန်နှင့် ရေချိုးပြီးတိုင်း Body Lotion ကို လူးပေးပါ။
နွေရာသီတွင် ခန္ဓာကိုယ် အရေပြားမှ ချွေးထွက်၍ ဆုံးရှုံးသွားသော ဆားဓာတ်နှင့် ရေဓာတ်ကို မဖြစ်မနေ ပြန်လည်ဖြည့်တင်းပေးရန်လိုအပ်ပါသည်။ အရေပြားအတွက် ရေဓာတ်လောက် အရေးတကြီး လိုအပ်သောအရာ မရှိပါ။ Moisturizer သည် နေ့စဉ် အသားအရေထိန်းသိမ်းရန်အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော အရာတစ်ခု ဖြစ်သည်။ ရေဓာတ်ကို အခြေခံ၍ ဖော်စပ်ထားသော Moisturizer ကို ၀ယ်ယူအသုံးပြုပါ။ အပြင်ထွက်ရာမှ ပြန်လာတိုင်း မျက်နှာ သန့်စင်ဆေးကြောသော အကျင့်ကို မွေးမြူပါ။ မျက်နှာပြင်ကို ရေများစွာဖြင့် အကြိမ်အရေအတွက်များစွာ ထိတွေ့ သန့်စင်ပေးပါ။ ပူလွန်းအေးလွန်းသော ရေကို အသုံးပြုခြင်းမှ ရှောင်ကျဉ်ပါ။ ချွေးပေါက်တွင်းမှ ဖုန်မှုန့်နှင့် အညစ်အကြေးများ သန့်စင်စေရန်အတွက် ရေနွေးငွေ့ဖြင့် ပေါင်းတင်ခြင်းကို မကြာခန ပြုလုပ်ပေးပါ။ ခြောက်သွေ့သောအသားအရေ အတွက် ၅မိနစ်ခန့်၊ အဆီပြန်တတ်သော အသားအရေအတွက် ၁၀မိနစ်ခန့် အချိန်ယူပါ။ ပြီးလျှင် သန့်စင်သော အ၀တ်ဖြင့် ခြောက်သွေ့အောင် အသာအယာ သုတ်ကာ Moisturizer ကို လိမ်းပါ။
အနည်းဆုံး တစ်ပတ်တစ်ကြိမ် မျက်နှာကို အသီးအနှံများ သို့မဟုတ် အသီးအနှံဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော ပေါင်းဆေးဖြင့်ပေါင်းတင်ပေးပါ။ မိမိအိမ်တွင်း မီးဖိုချောင်သုံး အသီးအနှံဖြင့်လည်း Moisturizer အဖြစ် လွယ်ကူစွာ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ သခွားသီးကို ပါးပါးလှီးကာ ရေခဲသေတ္တာတွင် ခေတ္တထား၍ မျက်နှာပြင်ပေါ်သို့ အလွှာလိုက် ကပ်ထားပြီး ၁၅မိနစ်မှ နာရီဝက်ထိ ထား၍ ရေစင်စင်ဆေးပါ။ အရည်ရွှမ်းသော အသီးအနှံနှင့် ဗိုက်တာမင်ဒီ ပါဝင်သော အစားအသောက် များများစားပါ။ ငါးကြီးဆီစားပါ။ နွေရာသီတွင် အရေပြားအတွက် အရေးအကြီးဆုံး အချက်မှာ ရေများများ သောက်ပါ။ တစ်နေ့လျှင် အနည်းဆုံး ၁၅ဖန်ခွက်ခန့်ထိ သောက်သုံးပေးပါ။ ပြုပြင်ထားသော အချိုရည်များထက် သဘာဝသစ်သီး ဖျော်ရည်များကို တတ်နိုင်သမျှ များများ သောက်သုံးသင့်ပါသည်။
အချို့သော သူများသည် မျက်နှာပြင်ကိုသာ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ပြီး မိမိ ခြေထောက်နှင့် လက်များအား ဂရုစိုက်ရန် မေ့လျှော့ ထားတတ်ကြပါသည်။ လက်နှင့် ခြေထောက်များကို ဂရုတစိုက် ထိန်းသိမ်းရန် မလို၊ အချိန်ကုန်သည်ဟု အထင်မှားနေတတ်ကြပါသည်။ မျက်နှာပြင် မည်မျှပင် လှပသော်လည်း ခြောက်သွေ့အက်ကွဲပြီး ညစ်ပေနေသော မသပ်မရပ် ခြေလက် အစုံနှင့်ဆိုလျှင် မိမိ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ထားသော မျက်နှာအလှသည်လည်း အလဟဿသာ ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ မိမိခြေလက်အစုံကို ၁၅မိနစ်မှ မိနစ် ၂၀ အထိ ရေထဲတွင် နှစ်၍ စိမ်ပါ။ ဆားအနည်းငယ်ကို ရေထဲထည့်ပါ။ ရေအေးတွင် ၂မိနစ် ရေပူတွင် ၂မိနစ် အလှည့်ကျ ပြောင်း၍ စိမ်းပေးပါ။ ၄င်းသည် သွေးလှည်ပတ်မှုကို ကောင်းစွာ အထောက်အကူဖြစ်စေပါသည်။ တစ်ပတ်လျှင် တစ်ကြိမ်၊ တစ်ကြိမ်လျှင် ၁၅မိနစ်ခန့် ပြုလုပ်ပေးသင့်ပါသည်။ နွေရာသီတွင် ရှူးဖိနပ်ကဲ့သို့ လေ၀င်လေထွက် မကောင်းသော ဖိနပ်များကို ရှောင်ကျဉ်သင့်ပါသည်။ ခြေညှပ် ဖိနပ်အပါးများ ခုံအနိမ့်များနှင့် လေ၀င်လေထွက် ကောင်းမွန်သော ဖိနပ်များကိုသာ ရွေးချယ် စီးသင့်ပါကြောင်း အကြုံပြုလိုက်ပါရစေ။
နွေရက်များကို ပျော်ရွှင် လန်းဆန်းစွာ ကျော်ဖြတ်နိုင်ကြပါစေရှင်......
Article for Hello Journal
Ref: Amazooo.com Beauty Advice
Posted by ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) at Saturday, April 03, 2010 Saturday, April 03, 2010 Labels: သုတအဖြာဖြာ
သင်္ကြန်မှာ ဆံပင်ပုံဆန်းနဲ့မှ တအားလန်းတယ်လို့ ထင်သူများအတွက် အဆန်းထွင်ဖို့ ဆံပင်ပုံ ဒီဇိုင်းဆန်းလေးတွေ ရှာကြံပြီး တင်ပေးလိုက်ပါတယ်..
တစ်ပွင့်တည်း ပန်တဲ့ခေတ် မဟုတ်တော့ဘူးတဲ့ (ကိုလန်ပြန်)
သင်္ကြန်နဲ့တော့ လိုက်ပါတယ်.. (ကိုထိပ်ကွက်)
ဒါလေးက တစ်မျိုး ဆန်းတော့ ဆန်းပါရဲ့.. (ကိုဘေးကြား)
ညှပ်ပေးတဲ့ဆရာ တော်တော် လက်ဝင်မယ့်ပုံ (ကိုလေးထောင့်ကွက်)
ရှေ့လား နောက်လား (ကိုနှုတ်ခမ်းမွှေး)
သူကလည်း ငယ်သေးတာကိုး လှချင်မှာပေါ့ (ကိုဘုတ်သိုက်)
ခေါင်းပေါ် လေမုန်တိုင်း ၀င်မွှေသွားပြီးပုံ (ကိုမွှေးနီ)
လူတွေရဲ့ အာရုံစူးစိုက်မှုကို ခံချင်တာကိုး............
အာတာပူစီ လိုလို ဘာလိုလို
ဆံပင်က ထွက်ပြေးမှာစိုးလို့ မျက်နှာနဲ့တွဲပြီး ပိုက်နဲ့ ဖမ်းချုပ်ထားတယ် ထင်ပ
အချွန်နဲ့ လူကို ထိုးမိရင်ဒုက္ခ
ပျားအုံကြီး ခေါင်းပေါ်တင်ထားသလား မှတ်ရ
ဒါလေးကတော့ မဆိုးဘူး... တံမြက်စည်းလုပ်ဖို့ကောင်းတယ်
ဆံပင်တွေ မီးလောင်ပြီး ဒီလောက်ပဲ ကျန်တော့တယ် ထင်တယ်..
ဒီရက်ပိုင်း စာမရေးအားသေးလို့ ပုံကလေးတွေနဲ့ ကျေနပ်ပေးကြပါဦးလို့....
အားလုံးဘဲ သင်္ကြန်မှာ လန်းနိုင်ကြပါစေရှင်.... :) :)